Sida loo kaabta iPod Music
> Resource > iPod > kaabta iPod Music si aad u computer ama Lugood
Music iPod Backing ilaa computer ama Lugood waa wax loo baahan yahay. Waxaad wax badan ka faa'iidaysan karaan ka. Waxaad awoodaa inaad ku raaxaysato music on your computer ama Lugood. Ama marka heeso aad iPod yihiin si lama filaan ah ugu tagtay, waxaad iyaga dajiyaan karaa computer istareexsan. Si kastaba ha ahaatee, aynu wada ognahay in, sida hal tababare qalab Apple ah, Lugood wax ay dhoofiyaan music iPod in Lugood ama computer dib u samayn karaa. Sidaa darteed, in ay dib u kor music iPod, aad eegto barnaamijyadooda kale caawimaad waa. Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jeedinaynaa inaad isku day Wondershare TunesGo . Sidaa daraadeed, waxa aad awoodi kartaa in ay gurmad music ka iPod si deg deg ah.
Sida loo gurmad music iPod in computer iyo Lugood
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa sida ay u gurmad iPod music in Lugood iyo computer. Halkan waxaan ku qaadan iPod taabashada sida tusaale. Fadlan raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. Run TunesGo iyo xiriiriyaan iPod xiriiri computer
Marka hore, download this gurmad music iPod on your computer qalab. Ku rakib iyo waxa maamula. Connect aad iPod xiriiri computer via cable USB la socota iPod taabashada ah. Ka dib waxa uu ku xiran computer, TunesGo si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Mid ka mid ah wax hor inta aadan isticmaalin TunesGo aad samaynaysaa waa si loo soo dajiyo Lugood on your computer.
Tallaabada 2. kaabta iPod xiriiri music in computer ama Lugood
In uu furmo suuqa hoose, si gurmad iPod music si aad u computer, waxaad riixi kartaa "Si gal". Haddii aad gurmad music in Lugood, guji "Si Lugood"> "Start".
Hadda, riix batoonka "Media" khaanadda tagay inay soo qaadaan suuqa kala warbaahinta. Guji "Music", badhanka ugu horeysay ee line ugu sareeya si uu u furo suuqa kala music. Dooro qaar ka mid ah heesaha oo riix "Ctrl + A" in ay doortaan heesaha oo dhan. Ama waxaad dooran kartaa oo keliya songs in aad rabto in gurmad. Markaas riix "Dhoofinta in". Haddii aad go'aansato in gurmad ay u computer music, doortaan "Dhoofinta in My computer". Marka uu furmo suuqa browser yar oo ka soo booda, waa in aad doorato gal ah si loo badbaadiyo music laga dhoofiyey. Haddii aad jeceshahay in aad badbaadin gabayo Lugood, doortaan "Dhoofinta in Lugood Library" ama "Smart dhoofinta in Lugood".
Haddii aad rabto in aad playlists gurmad in computer ama Lugood, guji "playlist" in guddi ka tagay. Daaqadda playlist ah, doortaan playlists aad doonayso oo guji "Dhoofinta in". Si playlists gurmad si Lugood, waa in aad dooro "Dhoofinta in Lugood Library". Haddii aad doonayso inaad gurmad in computer, waxaad u baahan tahay riix "Dhoofinta si aad u computer". Sidoo kale, waxay dooran Jid badbaadiyo in uu kaydiyo heesaha.
Hadda, aad Neve doonaa walwal ku saabsan badiyay aad music on computer ama Lugood Library. Kaliya 2 talaabooyinka, waxaad ka iPod gudbin doonaa heeso si computer iyo Lugood.
Fiiro gaar ah: TunesGo Windows iyo version Mac hadda si buuxda u taageersan iPod xiriiri macruufka 5, 6 iyo 7, nano iPod, classic iPod, shaandheeyn lagu iPod. The version Mac ma taageeri iPod xiriiri 3.
Download TunesGo in ay dib u heeso ka iPod in computer hadda!